वर्षभरिमा सवारी दुर्घटनामा११६ जनाको मृत्यु, सवारी चाप दुर्घटनाको मुख्य कारक - Sankalpa Khabar
3. भाेलीदेखि एक साता संखुवासभामा निषेशाज्ञा
4. प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
5. भट्याउने नेता, स्वर मिलाउने कार्यकर्ता
6. कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा किन भाग लिन चाहेनन ?
वर्षभरिमा सवारी दुर्घटनामा११६ जनाको मृत्यु, सवारी चाप दुर्घटनाको मुख्य कारक
३ बैशाख ११:३२
चितवन । गत वर्ष जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ११६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार ३७६ दुर्घटनामा परी उनीहरुले ज्यान गुमाएका हुन् ।
दुर्घटनामा परी ६१२ घाइते भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । घाइतेमध्ये २८१ गम्भीर र ३३१ सामान्य रहेका छन् । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टका अनुसार गत वर्ष चैतमा दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति सबैभन्दा बढी भएको छ । सो महिनामा भएका ३९ दुर्घटनामा २६ को ज्यान गएको छ । सबैभन्दा कम वैशाख र जेठमा ७ र १४ वटा दुर्घटनामा परी दुई÷दुई जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ । ती दुर्घटनामा ५७३ सवारी साधन परेको उनले जानकारी दिए ।
सवारी दुर्घटनामा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् । दुई सय ८६ मोटरसाइकल दुर्घटना भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विसं २०७६ को चैतसम्म जिल्लामा भएका ३१६ दुर्घटनामा परी १२३ को ज्यान गएको थियो । त्यस वर्ष मङ्सिरमा सबैभन्दा धेरै १९ को ज्यान गएको थियो । सबैभन्दा कम चैत महिनामा तीनको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि दुर्घटना र मृत्युदर घटाउन कठिन भएको भट्टको भनाइ छ । साँघुरो बाटो र सवारीको चाप बढी भएका कारण दुर्घटना बढी हुने गरेको उनले बताए । दुर्घटना बढी सङ्ख्यामा पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा भएको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
न्याय परिषद्का सदस्य निरालाको निधन
२१ बैशाख १३:२२
किन हुन्छ कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ ?
२२ बैशाख ०८:३१
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
२५ बैशाख १०:४४
सुदूरपश्चिममा ४३ सङ्क्रमितको मृत्यु
१९ बैशाख १८:०९
भेरी अस्पतालमा अक्सिजन भण्डारण ट्याङ्क जडान
२१ बैशाख १४:५४
सेती अस्पतालमा थप ६ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
वीरेन्द्रनगरको नयाँ रूप: सडकहरु बने चिल्ला, हरियाली र आकर्षक
२३ बैशाख १३:११
बिहे भोजमा सामेल होटल हायातका १८ कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण
२० बैशाख ११:२६
कोभिडबाट शङ्खरापुर -४ का वडाध्यक्ष तामाङको निधन
२५ बैशाख १९:३९
शनिबार आठ हजार ४१८ नयाँ सङक्रमित, ५३ जनाको निधन
२५ बैशाख १९:२६
ओलीलाई विश्वसको मत नदिने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय,ओली सत्ता…
२५ बैशाख १९:१८
२८ सांसदलाई कोरोना पुष्टि
२५ बैशाख १८:१८